warkii.com » RIKOODH: Sergio Ramos Oo Dhigay Rikoodh Taariikhi Ah Oo Aan Difaacyada Looga Baran
RIKOODH: Sergio Ramos Oo Dhigay Rikoodh Taariikhi Ah Oo Aan Difaacyada Looga Baran
Difaaca Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa isku qoray buugaagta taariikhda dunida kaddib markii uu gool ka dhaliyey kooxda Leganes ciyaartii ugu dambaysay ee kooxdiisa ee horyaalka LaLiga.
Ramos ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqaddii 9aad ee ciyaarta, waxaanu madaxa ku dhaliyey kubbad uu soo laagay laacibka khadka dhexe ee Isco, laakiin tababare Zinedine Zidane ayaa go’aansaday inuu nasiyo qaybtii dambe, waxaana lagu beddelay xilligii nasashada.
Nacho oo dhaawac ku maqnaa bil iyo dheeraad ayaa ciyaarta soo galay, waxaanu kulanka ugu dambeeya ka helay fursaddiisa iyadoo ay iska garab ciyaareen Ede Militao oo isaguna beddelay Varane oo kaydka ku jiray.
Zinedine Zidane ayay muuqatay inuu kasii fikirayo ciyaarta Manchester City ee lugta labaad ee wareegga 16ka oo ay ballansan yihiin horraanta bisha August.
Kabtan Sergio Ramos ayaa xili ciyaareedkani u ahaa mid cajiib ah oo uu goolkiisa ka ilaaliyey kubbado badan, iyadoo Los Blancos noqotay kooxda goolashii ugu yaraa laga dhaliyey xili ciyaareedka oo dhan, balse waxa u dheeraa waxqabadka afka hore isaga oo dhaliyey 11 gool oo horyaalka LaLiga ah.
Ramos ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee qarniga 21aad ka dhaliya horyaalka LaLiga goolashii ugu badnaa ee hal xili ciyaareed gudaheed, waxaanu dhaafay Mariano Pernia oo 10 gool dhaliyey 15 sannadood ka hor.